I-Basecamp Bungalows - Isitudiyo se-Snowdrift - I-Airbnb
I-Basecamp Bungalows - Isitudiyo se-Snowdrift
I-Snowdrift Studio e-Basecamp Bungalows iyindawo eqashisayo yeholide etholakala eGrand Marais enhle, eMinnesota ekwazi ukufinyelela kalula edolobheni, eLake Superior, eNorth House Folk School, eGrand Marais Art Colony, kanye nemizila namapaki amaningi endaweni. Lesi sikhala siyikampu eyisisekelo ephelele yohambo lwakho lwaseNyakatho Shore. Nonke namukelekile lapha.
I-Snowdrift Studio iyindlu yesitudiyo yangasese enefenisha. Sinekhishi eligcwele ngokugcwele elinazo zonke izinto zokupheka ozozidinga ukuze uzenzele ukudla kwakho noma uphuze inkomishi yekhofi ngaphambi kokuphuma usuku. Imidlalo inikezwa ekamelweni uma ufuna ubusuku obunokuthula kanye nolwazi olumayelana nemizila yasendaweni yokuhamba izintaba nempilo yasebusuku uma ungathanda ukuphuma.
Izivakashi zinokufinyelela okugcwele efulethini nasegcekeni. Izihlalo zangaphandle zinikezwa uma ungathanda ukuhlala ngaphandle ukuze uthole ikhofi lakho lasekuseni noma uzihambise otshanini ukuze ushise ilanga.
Siyabathanda izilwane ezifuywayo! Izilwane ezifuywayo eziziphethe kahle zamukelekile. Izilwane ezifuywayo akufanele zishiywe zodwa esikhaleni isikhathi eside futhi kufanele zifakwe phakathi nesikhathi sodwa. Inkokhelo eyengeziwe yesilwane esifuywayo engu-$50 izongezwa ngemva kokubhukha. Izivakashi zinesibopho sokugcina amazinga omsindo ephansi kanye nezindleko zokulungisa noma yimuphi umonakalo esikhaleni.